Dhamma Video - Browse Media - Song
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]- A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ- A - Ashin Agganyarna - Ashin Agganyana - အရှင်အဂ္ဂဥာဏ - [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]- A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ- B - Bago Sayardaw Bhaddanta Tejosara – Tayzawtharra - ပဲခူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ- B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး- B - Bodhitahtaung Bhaddanta Narada - ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနာရဒ- B - PhaYarPhoo AhPhwae - ဘုရားဖူးအဖွဲ့- B - Sayargyi U Ba Khin - တရားပြ ဆရာကြီးဦးဘခင်- C - Chanmyay Sayardaw - ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော်- D - ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရမဟာထေရ် ( တောတိုက်ဓမ္မ၀ိသာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်)- D - Dhamma - ဓမ္မ- D - Dhamma Movies - ဓမ္မရုပ်ရှင်များ- D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ-- M- Mar Mar Aye - မာမာအေး- G - gar htar taw myar - ဂါထာတော်များ- G - General Buddhism Knowledge - ဗဟုသုတရဖွယ်အဖုံဖုံ- G - S.N. Goenka - ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါ- G - Tabhawasasanar U Ghawthita - ကျမ်းပြုအကျော် ဘဒ္ဒန္တဃောသိတမဟာထေရ်- H - History - သမိုင်း (မှတ်တမ်းများ)- K - ကြာနီကန်ဆရာတော် - Kyar Ni Kan Sayardaw- K - Ashin Kondalarbiwuntha - အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ တပည့် မဟာဂန္ဓာရုံ နာယကချု�- K - Bhaddanta Kumarra - ပိဋကဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာပေဌာန ကထိက- K - Bhaddanta Kumarra - ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရ(ကျောက်ပန်းတောင်းဆရာတော်)- K - First KaThitWine Sayardaw - မူလကသစ်ဝိုင် ဆရာတော်- K - Khantee Sayardaw Bhaddanta Sujana - Thuzana - ဝန်းသိုမြို့ ခန္တီးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇန- K - KonLon Sayardaw - ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီး- K - U Kyaw Hein - ဦးဇင်းကိတ္တိသာရ- L - Lalde Sayardaw - လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး- LIVE- M - Dr. Min Tin Mon - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်- M - Maha Bodhi Myaing Sayardaw - မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဝနဝါသီ အရှင်ဉေယျဓမ္မသာမိမဟာ- M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ- M - MaSoeYain Student - မစိုးရိမ်စာသင်သား- M - Maung Htoung Myay Zin Sayardaw - မောင်းထောင်မြေဇင်းဆရာတော် (Video Only)- M - Mingun sayardaw - မင်းကွန်း ဆရာတော်- M - Moe Nyin Sayadaw - မိုးညှင်းဆရာတော်- M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ်- M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ- M - Myout Oo Sayartaw Ashin Waryar Mainda - အရှင်ဝါယာမိန္ဒ(မြောက်ဦးဆရာတော်)- M - U Myint Lwin - ဦးမြင့်လွင်- Mobile- N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ- N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ- N - U Narrada - မေဃ၀တီဆရာတော် ဦးနာရဒ- N - U Nawindalinkarra - ဦးနာဂိန္ဒလင်္ကာရ- O - U Oat Tan Tha - ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ- O - U Oattamatharra - သန်လျင်ဘုရားကုန်းသဘာဝရိပ်သာ- P - Dhamma Duta Ashin Pyin Nyar Zaw Ta - PinnyarJotta - ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ(တောင်စွန်းမြို့ )- P - non stop maha pahtan ceremonies - အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ- P - Pagoda - SayDePaHtoeMyar - CeTiPaHtoeMyar - စေတီပုထိုးများ- P - Pakoku sayardaw - Dhammanupassana - Anicca Sayardaw - ပခုက္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီး- P - Phar Auk Tawya Sayardaw - ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်- P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ- P - Pyin Nyar Darna Myar - ပညာဒါနများ- P - Sitagu One Star - Thitagu - ဘဒ္ဒန္တပညာနန္ဒ (သီတဂူကြယ်တစ်ပွင့်)- P - U Ponnyarnanda - ဦးပုညာနန္ဒ- R - Ashin Rajinda.Rajeinda - Rarzeinda - YaWaiNwe - အရှင်ရာဇိန္ဒ(ရဝေနွယ်…အင်းမ)- R - Recorded Live - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ဗီဒီယိုများ- S - Ashin Ardacsaransi U San Lwin - အရှင်အာဒိစ္စရံသီ (ဦးဆန်းလွင်)- S - Ashin Chandadhika - ShweParrami Tawya - Sandardhika - အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ)- S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ- S - Sar Taung Sayardaw - ဆားတောင်ဆရာတော်- S - Sar War - ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် စာဝါပို့ချချက်များ- S - Shwe Lin Yone Sayardaw - ရွှေလင်းယုန်ဆရာတော်- S - Shwe Nya War - Ashin Pinnyasiha - U pyin nyar thiha - ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ- S - Sin Phyu Kyun Sayardaw - ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရ- S - SuPaung YaHanKhan ShinPyu - စုပေါင်း ရဟန်းခံ၊ရှင်ပြု- T - Ashin Suriya - Thuriya - အရှင်သူရိယ- T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ- T - Maharsi sayardaw - U Thawbhana - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန- T - Metta aye sayardaw Bhaddanta Sujata - Thuzarta - မေတ္တာအေးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇာတ- T - Mogok dhammaransi Bhaddanta Thunanda - မိုးကုတ်ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ- T - MyaingGyiNgu Sayardaw - U thuzana - မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇန- T - Taungtan sayardaw U Uttamasara - တောင်တန်းသာသနာပြု ဦးဥတ္တမသာရ- T - TharMaNyaTaung sayardaw -U Winara - သာမညတောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိနယ- T - ThaZinYayKyaw Sayardaw Bhaddanta - NyarNawBarTha - သဇင်ရေကျော်ဆရာတော်- T - Theingu Sayardaw Bhaddanta Ukkahta - U Oak Ka Hta - သဲအင်းဂူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥက္ကဋ္ဌ- T - Theinngu - သဲအင်းဂူ- T - Thi La Ganda - သီလကဏ္ဍ- T - Twantay Sayardaw Bhaddanta Indaka - eindaka - တွံတေးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက- T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ- T - U Thu Ma Na - U SuMaNa - ဦးသုမန (စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆရာတော်)- W - BhadDanTa Wilartha - ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ (ကျောက်လုံးကြီး)- W - U Wirathu - ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)- W - Waibuu sayardaw - ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး- W - WarKhinGone sayardaw BhadDanTa Tikkha - ဝါခင်းကုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိက္ခ- Y - Yaw Sayardaw Bhadanta Thiraindarbiwuntha - ယောဆရာတော် (ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ)- Y - YaySaKyo(YaySaGyo) - WarYaMeinDarBhiWunTha - ရေစကြိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါယာမိန္ဒာဘိဝံသ- Y - YinKyayHmu ThinDan - ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း- Z - Ashin Zanitarlinkarra - Ashin Agganyarna - အရှင်ဇနိတာလင်္ကာရ- Z - Ashin Zeyapandita (Moe Nyin Pilot Sayardaw) - အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ (မိုးညှင်းပိုင်းလော့ဆရာတော်)- Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ- Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)- Z - Pyinmanar Maharbawdimyaing - U Zawtika- ပျဉ်းမနား၊ မဟာဗောဓိမြိုင်တောရဆရာတော် ဦးဇောတိက- Z - U zawtika - Pakkouku - ဦးဇောတိက (ဓမ္မသုခရိပ်သာ ပခုက္ကူမြို့) Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ News - သတင်းများ
D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ - Most Recent
D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ကရင် ၊ ဗမာ...
ကရင် ၊ ဗမာ ဓမ္မတေးသီချင်း
youtube link: http://www.youtube.com/watch?v=jlLrclvLWeg
Tags: ကရင် ၊ ဗမာ ဓမ္မတေးသီချင်း karen burma myanmar dhamma song D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗောဓိပင်န...
တေးဆို - မာမာအေး
ကဆုန်လပြည့် ညောင်ရေသွန်းပွဲ နှင့် ဗုဒ္ဓနေ့
Tags: ဗောဓိပင်နဲ့ ရွှေပလ္လင် ကဆုန်လပြည့် ညောင်ရေသွန်းပွဲ နှင့် ဗုဒ္ဓနေ့ မာမာအေး ဓမ္မတေးသီချင်း dhamma songs bodhi pin and shwe palin kasoan full moon day and the buddha day D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Buddha Say
Tags: Buddha Say Dhamma Talk D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Blessed Refuges-Buddha...
Tags: Blessed Refuges-Buddha Dhamma Sangha Taking refuge in the triple gems D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Dhamma Is
Tags: Dhamma Is ဓမ္မဆိုသည်မှာ D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓမြတ်စ...
- လပြည့်လေး မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော် buddha image D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ငါးပါးဂုဏ...
- www.maung69@gmail.com မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: ငါးပါးဂုဏ်အင် five qualities D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓမြတ်စ...
- doubletun မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ပုံတော် buddha image D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Metta Sutta...
Metta Sutta အရပ်(၁၀)မျက်နှာ မေတ္တာပို့ Original Youtube Link:
Tags: Metta Sutta အရပ်(၁၀)မျက်နှာ မေတ္တာပို့ spread metta to 10 directions myittar thoat metta thoat metta post myittar post D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] စိတ် Dhamma Song
စိတ် - Vimuttisukha Bliss မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်
Tags: Mind စိတ် Pages: 1234567 of 12